सम्झनाः याद आउने छ त्यो आवाज - केके | साहित्यपोस्ट
जनक कार्की	 प्रकाशित १८ जेष्ठ २०७९ १३:२५
हम रहेँ या न रहेँ कल
पल ये है, प्यार के पल
चल आ मेरे सँग चल
चल सोचेँ क्या छोटी सी है जिन्दगी
कल मिल जाए तो होगी खुश नसिबी
हम रहेँ, या न रहेँ याद आएँगे ये पल ।
जब सन् १९९९ मा केकेको आवाजमा यो गीत संगीतप्रेमीको माझमा आयो, यस गीतले नछुने मुटु विरलै भेटिए । एउटा पृथक् मधुर आवाज, गिटारको एक-एक नोटले हृदयलाई स्पर्श गर्ने संगीत संयोजन, सबैभन्दा बढी गजब त यो गीतको शब्द । जीवनको शाश्वत सत्यको दर्शनलाई सरल भाषामा उनिएको यो गीतका शब्दले जिन्दगीको यो खेलमा हामी पाहुना भएको र यसको मज्जा बेलैमा लिनपर्ने भाव प्रकट गरेको छ ।
घाम उठ्न अल्छी मानेर घरी बादलको सिरक तान्दै घरी कोल्टे फेर्दा सिरक बाहिर खस्केर झुल्किदै गरेको बिहानीको पलमा स्थानीय रेडियोबाट एउटा अप्रिय समाचार पाठ भयो, रेडियो उदघोषकबाट ।
`बलिउडका प्रसिद्ध गायक केकेको ५३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । उनी कलकत्तामा सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए, प्रस्तुतिको केही समयपछि अचानक यो घटना घट्यो । उनलाई तत्काल ३१ मे रातको १०:३० बजे सिएमाअराइ अस्पताल पुर्‍याइयो, जहाँ डाक्टरले उनलाई मृत घोषित गरिदिए ।
केके कोलकत्ताको गुरुदास कलेजको उत्सवमा सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार जुन होटलमा बसेका थिए त्यहीँ होटलको सिँढीबाट उनी लड्न पुगे । अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको देहान्त भइसकेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानको आधारमा उनको मृत्युको कारण हृदयघात बताइएको छ ।´
सधैं उनको सुमधुर गीत प्रसारण गर्ने रेडियोले उनको मृत्युको घोषणा यसरी गरिदियो कि मौसम जस्तै धुम्म भयो, मुटुको पाखापखेरो । `हम दिल दे चुके सनम´ फिल्मको लागि उनले गाएको एउटा उदाश गीतलाई बारम्बार मनमनै गाउन थालेँ ।
`तड़प तड़प के इस दिल से
आह निकलती रही
तो लुट गए.. हाँ लुट गए
तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में ।´
केके उर्फ कृष्णकुमार कुन्नाथ भारतीय गायक थिए । जसले हिन्दी, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, मराठी, बंगाली र गुजराती फिल्मका लागि गीत गाएका छन् । उनी केकेको नामबाट प्रसिद्ध थिए ।
चार वर्षको अवधिमा उनले ११ वटा भारतीय भाषामा ३५०० भन्दा अधिक जिंगल गाएका थिए । उनले पहिलो ब्रेक युटिभीबाट पाए । उनले आफ्ना गुरु लेस्ले लुइसको प्रशंसा गर्थे, जसले उनलाई पहिलो जिंगलमा गाउने मौका दिए ।
उनले हिन्दीम ५०० भन्दा अधिक र तेलुगु, बंगाली, तमिल, कन्नड, मलयालम, गुजराती गरेर करिब २०० वटा गीत गाएका छन् ।
उनका समकालीन सांगीतिक मित्रहरू अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, प्रीतम, अरमान मलिक, अंकित तिवारी आदिले उनको आवाज र संगीतको ज्ञानको प्रशंसा गर्दथे ।
केकेको जन्म एवं जीवन परिचय
केकेको जन्म २३ अगस्त १९६८ मा दिल्लीको भारतमा भएको थियो । उनी मलयाली परिवारसँग सम्बन्धित थिए । उनको पिताको नाम सिएस नायर र माताको नाम कुन्नाथ कनकवल्ली हो ।
सन् १९९४ मा उनी मुम्बईमा संघर्षको लागि गए । उनलाई यो युगको किशोर कुमार पनि भनिन्छ । गायनमा कुनै औपचारिक तालिम नगरेका केकेलाई अहिले पनि प्रार्श्व गायनमा एउटा प्रतिभाशाली गायकको रुपमा स्मरण गरिन्छ ।
उनले माउन्ट सेन्ट मौरी कलेज दिल्लीबाट विद्यालय स्तरको शिक्षा ग्रहण गरे । विश्वविद्यालयको अध्यन दिल्लीको किरोडीमल कलेजबाट कमर्स विषयमा ग्रेजुएसन गरे ।
उनले सन् १९९१ मा आफ्नी प्रेमिका ज्योतिसँग विवाहबन्धनमा बाधिए । उनको श्रीमतीलाई उनी बच्चैदेखि चिन्दथे ।
विवाह गर्नको लागि उनले सेल्सम्यानको जागिर पनि गरे । गायनमा आफ्नो करिअर बनाउन छ माहिनापछि उक्त जागिर छोडिदिए ।
गायनमा करिअर बनाउनको लागि उनका पिता र श्रीमतीले नैतिक समर्थन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा उनलाई जागिर छोड्न सजिलो बनायो ।
केके दम्पतिबाट एक छोरा र छोरी जन्मिए । छोरा नकुल जो गायक पनि हुन् ।
उनको पहिलो एल्बम `पल´ जुन सन् १९९९ मा रिलिज भएको थियो । यो एल्बमका लागि केकेले सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बमको रुपमा स्टार स्क्रिन अवार्ड हात पार्न सफल भए । उनको दोस्रो एल्बम `हमसफर ´ सन् २००८ मा रिलिज भएको थियो ।
हरि अधिकारी	 २६ असार २०७८ ००:०१
चर्चित झुसिल्किरोका सर्जक रहेनन्
१७ जेष्ठ २०७८ १०:०१
१४ पुस्तकका लेखक तथा राजनीतिक मनोविज्ञानका धुरन्धर पण्डित…
२० पुष २०७७ १७:३१
बलिउड प्रार्श्वगायनमा उनलाई पहिलो अवसर `माचिस´ ( १९९६) `छोड आए हम वो गलियां´बाट प्राप्त भएको थियो । उनको पहिलो गीत नै सर्वाधिक चर्चित बन्यो ।
केकेलाई प्रमुख गायकको रुपमा स्थापित गराउने गीत फिल्म `हम दिल दे चुके सनम´ को `तडप तडप के इस दिल´ बन्न पुग्यो । उनको जीवनकालमै यो गीत सर्वाधिक हिट गीत बन्न पुग्यो । यो गीत पछि उनलाई गीत गाउने अफरको ओइरो लाग्न थाल्यो ।
उनी सन् २००५ मा सोनी टिभीको रियालिटी शो `फेम गुरुकुलमा निर्णयाकको भूमिकामा पनि देखिए ।
सन् २०१३ मा उनले अन्तर्राष्ट्रिय एल्बम राइज अप-कलर्स पीसका लागि गीत गाए । जुन गीतलाई तुर्की कवि फेतुल्लाह गुलेनद्वारा लेखेका थिए । उनले उक्त एल्बमको लागि `रोज अफ माइ हार्ट´ नामक गीत रेकर्ड गरेका थिए ।
केकेले पाकिस्तानी टिभी शो `द घोस्ट´ का लागि `तन्हा चला´ नामको गीत गाए । जुन गीत सन् २००८ मा हम टिभीमा प्रसारण गरिएको थियो ।
केकेले जस्ट मोहब्बत, कुछ झुकी सी पलकी, हिपहिप हुररे, काव्याञ्जली र जस्ट डान्स जस्ता कयौं टेलिभिजन धारावाहिकका लागि पनि गीत गाए ।
केकेको बारेमा रोचक तथ्य
– उनी एउटा सांगीतिक पृष्ठभूमिको परिवारसँग सम्बन्ध राख्थे । उनका पिता संगीतका पारखी थिए । उनको आमाले सांगीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन्थिन् । उनको हजुरआमा संगीत शिक्षक थिइन् ।
-संगीतमा उनको रुचि विद्यालय स्तरबाट नै थियो । आफ्नो आमाले गाएको मलयाली गीत सुन्थे र त्यसलाई गाउने कोसिस गर्थे, उनका पिताले त्यसलाई टेप रेकर्डरमा रेकर्ड गर्दिन्थे ।
– उनलाई संगीत विद्यालयमा पनि भर्ना गरियो तर उनी दुई दिन मात्र गएर संगीत सिक्न छोडिदिए । भारतका महान गायक किशोर कुमारले पनि संगीतको औपचारिक शिक्षा नलिएकाले आफूले संगीत नसिक्ने तर्क दिन्थे ।
– शोले फिल्मको मेहबुबा भन्ने गीत उनलाई सर्वाधिक मनपर्ने गीत हो ।
-उनी दुई कक्षामा पढ्दा नै स्कुलको सांगीतिक कार्यक्रममा भाग लिएर फिल्म `राजा रानी´ को गीत `जब अंधा होता हे´ गीत गाएर प्रशंसा बटुले । यही गीत प्रदर्शनपश्चात् उनले संगीतलाई गंभीर रुपमा लिए ।
-उनी अमिर खानको आवाज बनेर गीत गाउन चाहन्थे ।
-फिल्म `तारे जमीन पर´को गीत `माँ´ सुरुमा केकेले गाएका थिए । गीत रेकर्डिङका बेला केके वैदेशिक भ्रमणमा गए । उनलाई गीतमा परिवर्तन गरिएकाले फेरि गाउन अनुरोध गरियो तर उनी असमर्थ भए । सो गीतलाई शंकर महादेवनले पुनः गाए ।
-केकेले `बजरंगी भाइजान´ का लागि गीत `तु जो मिला´ सिड्नीमा रेकर्ड गराएका थिए । उक्त स्टुडियो `स्टुडियो ३०१´ यस्तो प्रसिद्ध स्टुडियो हो जहाँ एल्टन जान, म्याडोना, बिली, जोएल र कोल्डप्स जस्ता चर्चित गायकगायिकाले गीत रेकर्ड गराएका थिए ।
-उनका छोरा नकुलले उनीसँगै `हमसफर´ फिल्मको `मस्ती´ गीतमा आवाज दिएका छन् ।
– उनका प्रसिद्ध गीतको लिस्टमा पल, तड़प-तड़प के, सच कह रहा है दीवाना, आवारापन बंजारापन, आशाएं, तु ही मेरी सब है, क्या मुझे प्यार है, लबों को, जरा सा, खुदा जानें, दिल इबादत,है जूनून, जिंदगी दो पल की, मै क्या हूँ,हां तू है, अभी-अभी , हा तुझे सोचता हूँ, इंडियावाले , तो जो मिला आदि पर्दछन्।
– बलिउड संगीत उद्योगका लागि यो वर्ष निकै दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । महान गायिका लता मंगेश्कर, गायक तथा संगीतकार बप्पी लहिरी पछि यो समयका सर्वाधिक लोकप्रिय गायकले पनि यो लोकलाई छोडेर गएका छन् ।
देखो हुवे हम तो हवा ….
दिल को किनारे ख़्वाबों के नीचे
है खोया .. अपना जहां ..
मैं लापता भूला पता होशो हवा
है लापता ….
उनले गाएको यो गीत जस्तै उनी अब यो पृथ्वी लोकबाट भैतिक शरीरलाई बेपत्ता बनाएर गएका छन् । तर उनको आवाज भने यहि कतै सधैभरी गुञ्जिरहने छ । अल्विदा केके …
महारानीमा जात र द्यौताको इतिहास